မိန်းမသားတို့ အလှနဲ့ မြန်မာ့ချည်ထည် - SANTHITSA
ဟိုးလွန်လေပြီးသော ရာစုနှစ်များ ဆီကဆိုလျှင် ပြည်တွင်းဖြစ်ကို အားပေးပါဟု ကြွေးကြော်နေချိန်တွင် နိုင်ငံခြားဖြစ် အထည်များကိုသာ အထင်ကြီး ဝယ်ယူ ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြ ဖူးပေသည်။ ယခုခေတ် ယခုအခါတွင်တော့ မြန့်မာ့ရိုးရာ ချည်ထည်များမှာ တစ်ခေတ် ဆန်းလာပြီး ရိုးရာ ချည်ထည်များကိုလည်း နှစ်သက်စွာ ဝတ်ဆင် လာကြပြီ ဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများရဲ့ ရိုးရာ အထည်များဟာလည်း လှပဆန်းသစ်ပြီး ချည်သားများနဲ့သာ ယက်လုပ်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာ ချည်ထည်များနဲ့ တိုင်းရင်းသားရိုးရာ ချည်ထည်များကို ကမ္ဘာကပင် စိတ်ဝင်စားလာကြသည်ကို တွေ့မြင်ရပေသည်။
ချည်ထည်ရဲ့ ကောင်းကျိုးများကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်…
မြန်မာဖြစ် ချည်ထည်များဟာဆိုရင် ဓာတုပစ္စည်းများနဲ့ ကင်းပြီး သဘာဝ စိုက်ပျိုးပင်ဖြစ်တဲ့ ‘ဝါ’ ပင်ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဝါ ပင်ကနေ တိုက်ရိုက် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ချည်မျှင်များကို ယက်လုပ်ထားခြင်းကြောင့် သင့်အသားအရေ ပျက်ဆီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာ့ ချည်ထည်များဟာဆိုရင် ပြင်ပ လေဒါဏ်၊ နေပူဒါဏ်တွေကို အရေပြားဆီ အလွယ်တကူ မရောက်ရှိစေရန် ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ နေရောင်ခြည်ကို စုပ်ယူခြင်းမရှိပဲ တွန်းလှန်ပေးနိုင်တဲ့သတ္တိ အပြည့်အဝ ရှိပါတယ်။ ချည်သားရဲ့ ထူထဲနုညံခြင်း သဘာဝကြောင့် အေးတဲ့ ရာသီမှာ အနွေးဓာတ်ကိုပေးပြီး ပူတဲ့ရာသီမှာ အအေးဓာတ်ကို ပေးပါတယ်။
မြန်မာ့ ချည်ထည်များဟာ နဂိုမူလ ရှိရင်းစွဲ သဘာဝအရ ဝတ်ဆင်ထားသည့်အခါ ချွေးစို့လာစေပြီး ပျံထွက်လာသည့် ချွေးတို့ကို ပြန်လည် စုပ်ယူ ထိန်သိမ်းထားနိုင်စွမ်း ရှိတာမို့ အသားအရေ အေးမြမှူကို ရရှိစေပြီး ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူ ပြုစေပါတယ်။
ချွေးစို့ပြီး အေးမြတဲ့ အသားအရေကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ မြန်မာ့ချည်ထည်များဟာ တင်းရင်းစိုပြေတဲ့ အသားအရေကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ခြောက်သွေ့ပျော့တွဲ မသွားအောင် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။
မြန်မာ့ချည်ထည်နဲ့ ဖက်ရှင်တစ်ခေတ် ဆန်းလာပြီမို့ ပြည်တွင်းဖြစ်ကို အားပေးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာ လှပမှူကို မြှင့်တင်ကြပါစို့….
မိနျးမသားတို့ အလှနဲ့ မွနျမာ့ခညျြထညျ
ဟိုးလှနျလပွေီးသော ရာစုနှဈမြား ဆီကဆိုလြှငျ ပွညျတှငျးဖွဈကို အားပေးပါဟု ကွှေးကွျောနခြေိနျတှငျ နိုငျငံခွားဖွဈ အထညျမြားကိုသာ အထငျကွီး ဝယျယူ ဝတျဆငျခဲ့ကွ ဖူးပသေညျ။ ယခုခတျေ ယခုအခါတှငျတော့ မွနျ့မာ့ရိုးရာ ခညျြထညျမြားမှာ တဈခတျေ ဆနျးလာပွီး ရိုးရာ ခညျြထညျမြားကိုလညျး နှဈသကျစှာ ဝတျဆငျ လာကွပွီ ဖွဈသညျ။
တိုငျးရငျးသား လူမြိုးမြားရဲ့ ရိုးရာ အထညျမြားဟာလညျး လှပဆနျးသဈပွီး ခညျြသားမြားနဲ့သာ ယကျလုပျထားကွတာ ဖွဈပါတယျ။ မွနျမာ့ရိုးရာ ခညျြထညျမြားနဲ့ တိုငျးရငျးသားရိုးရာ ခညျြထညျမြားကို ကမ်ဘာကပငျ စိတျဝငျစားလာကွသညျကို တှမွေ့ငျရပသေညျ။
ခညျြထညျရဲ့ ကောငျးကြိုးမြားကို ကွညျ့မယျဆိုရငျ…
မွနျမာဖွဈ ခညျြထညျမြားဟာဆိုရငျ ဓာတုပစ်စညျးမြားနဲ့ ကငျးပွီး သဘာဝ စိုကျပြိုးပငျဖွဈတဲ့ ‘ဝါ’ ပငျကနေ ထုတျလုပျထားတာဖွဈပါတယျ။ ဝါ ပငျကနေ တိုကျရိုကျ ထုတျလုပျထားတဲ့ ခညျြမြှငျမြားကို ယကျလုပျထားခွငျးကွောငျ့ သငျ့အသားအရေ ပကျြဆီးခွငျးမှ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
မွနျမာ့ ခညျြထညျမြားဟာဆိုရငျ ပွငျပ လဒေါဏျ၊ နပေူဒါဏျတှကေို အရပွေားဆီ အလှယျတကူ မရောကျရှိစရေနျ ထိထိရောကျရောကျ ကာကှယျပေးပါတယျ။ နရေောငျခွညျကို စုပျယူခွငျးမရှိပဲ တှနျးလှနျပေးနိုငျတဲ့သတ်တိ အပွညျ့အဝ ရှိပါတယျ။ ခညျြသားရဲ့ ထူထဲနုညံခွငျး သဘာဝကွောငျ့ အေးတဲ့ ရာသီမှာ အနှေးဓာတျကိုပေးပွီး ပူတဲ့ရာသီမှာ အအေးဓာတျကို ပေးပါတယျ။
မွနျမာ့ ခညျြထညျမြားဟာ နဂိုမူလ ရှိရငျးစှဲ သဘာဝအရ ဝတျဆငျထားသညျ့အခါ ခြှေးစို့လာစပွေီး ပြံထှကျလာသညျ့ ခြှေးတို့ကို ပွနျလညျ စုပျယူ ထိနျသိမျးထားနိုငျစှမျး ရှိတာမို့ အသားအရေ အေးမွမှူကို ရရှိစပွေီး ကနျြးမာရေးကို အထောကျအကူ ပွုစပေါတယျ။
ခြှေးစို့ပွီး အေးမွတဲ့ အသားအရကေို ဖွဈပျေါစတေဲ့ မွနျမာ့ခညျြထညျမြားဟာ တငျးရငျးစိုပွတေဲ့ အသားအရကေို ဖွဈပျေါစပွေီး ခွောကျသှပြေ့ော့တှဲ မသှားအောငျ ထိနျးသိမျးပေးနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ။
မွနျမာ့ခညျြထညျနဲ့ ဖကျရှငျတဈခတျေ ဆနျးလာပွီမို့ ပွညျတှငျးဖွဈကို အားပေးခွငျးဖွငျ့ ကနျြးမာ လှပမှူကို မွှငျ့တငျကွပါစို့….
လုံးတီးကားတွေကို မရိုက်တော့ဘူးလို့ ကီယာနိုက်လေးက အရွန်းဖောက် ကလေး၂ ယောက်မွေးပြီး နောက်မှာတော့ ကလေးတွေကို နို့တိုက် ရလွန်းလို့ သူမရဲ့ရင်သားပုံပျက်သွားပြီ ဖြစ်လို့ နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်လုံး ပြရတဲ့ ရိုက်ကွင်းတွေ ပါတဲ့ ကားတွေ ဆိုရင် ကိုယ်တိုင် သရုပ် မဆောင်တော့ ဘူးလို့ ဟောလီးဝုဒ် ဆယ်လီ ကီယာနိုက်လေး အရွန်းဖောက်ပြီး ပြောသွား ပါတယ် ။ ကီယာနိုက် လေးက ဗြိတိန် သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပြီး ကလေးဘ၀ ကတည်းက ရုပ်ရှင် လောကမှာ ကျင်လည် ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။ ရုပ်ရှင်ဆု တော်တော် များများကို ရရှိခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဗြိတိသျှ ဘုရင်မကြီးက ချီးမြင့်ထားတဲ့ …